Iifom zebantwana - ezempilo kunye nenye indlela enomnandi
Yintoni enokuyenza ukuphula imikhuba yokuphila?
Iingcebiso ezingakumbi zokumuncwiswa kakuhle ngaphandle kokuzisola
Abantwana bathanda iilekese. Kukhuselekile njengam amen ecaweni. Kwaye ngokungafani nakwexesha elidlulileyo, kubonakala ngathi banokufikelela kwiindawo ezincinci kuyo yonke indawo. Oku kuqala kwinqanaba lemehlo labantwana kwivenkile yokukhangela kwaye liyaqhubeka kwimikhosi yokuzalwa yabantwana ngamaqebelengwane e-chocolate, i-windbags kunye ne-smarties.
Ukumnandi okumnandi ngaphandle kokuzisola
Nangona sonke siphelile malunga nokuba ushukela unjani emzimbeni, ukugqithisa kakhulu kunengxaki yesizukulwana sethu, esiqhubekayo kubantwana bethu.
Akunangento kwiminyaka yakutshanje kukho ukuvakala ukuba isizukulwana samantombazane enesibeleko sangoku siza kufa ngaphambi kwesizukulwana sabazali ngenxa yokutya okungondlekiyo. Ngexesha apho izigidi zabantu zilambile kwaye zifa ngenxa yokungondleki.
Itafile ze-Sugar kwaye ziphakamisa iminwe yenkcazo
Kakade e-childergarten abantwana bayaziswa malunga noshukela kunye namafutha ekudleni. Akunjalo nje iipesele ezithandekayo ezingenakukhathazeka ukuba zifikeleleke njengokutya, kodwa nazo zipakishwe kakuhle, ezibalabala, ezinokuthi zineempilo ezinabantwana ezifana neziqhamo zegnomes kunye ne-kiddie sausage.
Kutheni abantwana kunye nabantu abadala bebuyela kwimikhwa emidala kwaye bakhetha ukuthabatha ibhotile ye-chocolate kune-yoghurt yendalo kunye neziqhamo ezintsha? Kwelinye, ngokuqinisekileyo lixesha lexesha. Ibhotile ye-chocolate isilungisiwe, isiqhamo kufuneka uhlambe kwaye usike usikhuphe kwi-yogurt.
Ukongeza, isiqhamo sempiliso sinokubiza ngaphezu kwecokoti, esoloko isesekondari kwaye isebenza nje njengengxabano.
Ukuxuba okunomsoco ngaphandle kokuzisola kusebenza ngokutya okunempilo. Loo mntu uyakuthanda ukuba mnandi ubonakala engenangqondo kuye - kwaye kunye ne-amniotic fluid iyakuthandeka. Kodwa ungayilondoloza njani indlela yokutya okunempilo ngexesha elide?
Nantsi umphumo wabazali abaceliwe. Akwanele ukuba ufundise abantwana ngezikhathi ezithile ukuba ungasebenza njani. Ukutya okunempilo kunokufunda. Iqala ngeetafile zecala lokulala.
Yilusebenzise ukukhonza isiqhamo esincinci emva kokuhlwa kwasemini. Ehlobo, ii-berries zazo zonke iintlobo zithatha. Ngoko unciphisa ukukhanga iifomese kwaye ngexesha elifanayo unika ukwanda kwamavithamini, nokuba ngaba kufuneka uhambe ngokukhawuleza.
Ushukela - isilingo esitsha esilungileyo samhla
Musa ukuguqula intsapho yakho yokutya ebusuku. Kunjengokukhathazeka njengepikiniki emvula. Qala ngeyodwa into uze uyigcine uze ube ngumkhwa. Emva koko, yenza enye into.
Qinisekisa ukuba awuyi kunqanda, ngaphandle koko uya kuphelelwa ngumdla ngokukhawuleza ukutya okunempilo. Ukuba uzama kancane, abantwana bakho baya kukwazi iziqhamo eziqhelekileyo, izityalo kunye nezitya.
Izinto ezingaphezulu komntwana wakho aziyo, ukhetho oluninzi oluya kuba nalo emva kokupasa ukutya kwabo ngokwabo. Musa ukulibala ukuba kukho imifuno eninzi engokwemvelo imnandi kakhulu. Iqungu, i-carrot kunye ne-zucchini ziyimimiselo embalwa nje.
Isonka sinokuthi sibe neqhamo esikhundleni se-nutella okanye i-jam. Nanku i-banana, ipere, umkhiwane okanye i-apula kumgca omncinci we-kiriki ushizi.
Ukutya okunempilo kwabantwana
Isonka seprotheyini | ukudla
Ukunganyanzeliseki kwaLactose | Impilo yondlo
Ukutya okunempilo | Impilo yokutya
Iwayini ... Ukutya kunye neziphuzo